Heart's Medicine Hospital Heat 67 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 67 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Heart's Medicine Hospital Heat
Heart's Medicine Hospital Heat ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်အကြိုက်ဆုံးဆရာဝန် Allison ပြန်သင်ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်တဲ့ဆုတ်ထားတာဆေးရုံအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်းထဲမှာပါ! ထိုမိန်းမသည်🏥🚑 ... လိမ့်မည်မဟုတ်🔥
❤️ နှလုံးရဲ့ဆေးပညာမှ THE စိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောနောက်ဆက်တွဲ PLAY - တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာသစ်ကိုစွန့်စားမှုအပေါ်သင်အကြိုက်ဆုံးဆရာဝန်အနာကိုငြိမ်းစေခြင်းနှင့် join ဖို့အချိန်
❤️ 60 captivating အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်နဲ့ 30 အပိုစိန်ခေါ်မှုအဆင့်ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖွေစျလာ
❤️ DISCOVER 23 mini-ဂိမ်းများ နဲ့, အောက်စီဂျင်နှင့်အတူအဆုတ်ဖြည့်ဆည်း readouts အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့တူအထူးကုသမှု, လုပ်ဆောင်
အချစ်ဇာတ်လမ်း, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, ဒရာမာ, အသက်ကိုရတတ်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံ❤️ WITNESS ဆေးပညာဒရာမာ
❤️ အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်6အပူအခန်းကြီးဖြတ်ပြီးအသစ်သောပစ္စည်းကိရိယာများဝင်ငွေအားဖြင့်ဆေးရုံ upgrade
သရုပ်ဆောင်များ နဲ့❤️ ကိုဖမ်း UP နှင့် Little က Creek အဘိဓါန်ဆေးရုံကနေအားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဆင်းသွားခဲ့တာရဲ့အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့
❤️ လုံးဝအထူးစိန်ခေါ် နဲ့ Allison ရဲ့တိုက်ခန်းကိုအလှဆင်ဖို့စိန်စုဆောင်း
❤️ တစ်ခုအဆုံးမဲ့အဆင့်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်တူသောလူမြားစှာအပို ပျော်မွေ့
အဘယ်အရာကိုဒရာမာ နှလုံးရဲ့ဆေးပညာအထဲကရှာတွေ့ဖို့အဆင်သင့် - ဆေးရုံကြီးအပူ ငါတို့ချစ်သောဆရာဝန်ဆောင်ကြဉ်းကြမည်နည်း 👩⚕️
ဒါဟာရာသီညာဘက်ယခင်ဆွဲဆောင်မှုစွန့်စားမှုပြီးနောက်ကိုယူလိုက်တယ်။ အမှုအရာနောက်ဆုံးတွင် Little က Creek အဘိဓါန်ဆေးရုံတွင်ချငြိမ်သက်သွားစေကြပါပြီဟန် ... 🏥
သို့သော်မကွာများအတွက်! Allison သူမ၏မိခင်ကနေဖုန်းခေါ်လက်ခံရရှိတဲ့အခါသူမစဉ်းစားရန်အရာကိုသိမထားဘူး။ သူမသည် 20 ကျော်နှစ်များတွင်သူမ၏ mom, မမြင်ရပြီ! အဘယ်ကြောင့်သူမအားလုံးဤအချိန်ပြီးနောက် Allison ကိုဆက်သွယ်မလဲ ထိုမိန်းမသည်အဘယ်အရာကိုလိုခငျြနိုင်မည်နည်း Allison သူမ၏အနာဂတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန်အတွက်သူမ၏အတိတ်ရင်ဆိုင်ရဖို့ထက်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိနှင့်အတူကျန်ခဲ့သည်ကို ...
သူမဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှသောအလာသေးဖြစ်ပါတယ်အရာအားလုံးကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ခွန်အားရှိလိမ့်မည်နည်း ထွက်ရှာတွေ့မှသာတလမ်းတည်းရှိတယ် ...
အကူအညီ Allison ဒီမီးဆေးရုံအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်းထဲမှာသူမရဲ့ကြေကွဲဖွယ်အတိတ်ရင်ဆိုင်ရ! 💉🚑🔥
အခမဲ့များအတွက်ပထမဦးဆုံးအနညျးငယျအဆငျ့စမ်းကြည့်ပါ! အဆင့်ဆင့်အပြည့်အဝအဖြည့်တစ်ဦး In-app ကိုဝယ်ယူနှင့်အတူသော့ဖွင့်နိုင်ပါသည်။
Facebook ပေါ်မှာ Allison Follow:
ပိုပြီး GameHouse မူရင်းပုံပြင်ခံစားကြည့်ပါ, ငါတို့ကအခြားဂိမ်းကြိုးစားကြ:
🌟နှလုံးရဲ့ဆေးပညာ - အနာမှအချိန်: https://goo.gl/pkAp5J
🌟 Delicious - အမ်မလီရဲ့ခရစ္စမတ် Carol: https://goo.gl/vmXbQi
🌟 Delicious - တစ် Bottle သခုနှစ်တွင်အမ်မလီရဲ့စာ: https://goo.gl/PEyYzG
🌟အလွ - Angela ရဲ့ High School တွင်လည်ပေါင်းစီးခြင်း: https://goo.gl/UmfsOC
🌟အလွ - Angela ရဲ့ဖက်ရှင်ဖျားနာ: https://goo.gl/czC8qo
🌟ဒေါက်တာဂရုစိုက် - အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး 911: https://goo.gl/XNV042
🌟မာရိသညျ le စားဖိုမှူး - ဟင်းချက်စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ: https://goo.gl/xQRE0y
Heart's Medicine Hospital Heat အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Heart's Medicine Hospital Heat အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Heart's Medicine Hospital Heat အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Heart's Medicine Hospital Heat အား အခ်က္ျပပါ
mat7bk19 စတိုး921.71k
Heart's Medicine Hospital Heat ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Heart's Medicine Hospital Heat အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 67
App Name: Heart's Medicine Hospital Heat
File Size: 194.95MB
Release date: 2019-07-08 17:57:18
လက်မှတ် SHA1: A8:EB:BE:DB:6A:50:A2:E7:06:8B:64:45:22:B7:02:F4:0F:BC:F5:78
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Erik Goossens
အဖွဲ့အစည်း (O): Gamehouse ehv
နယ်မြေ (L): Eindhoven
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Brabant
Heart's Medicine Hospital Heat APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ